N'ihe dị ka ọnwa itoolu, nwa ahụ gbara gburugburu ma gbaa ya gburugburu. Na-ejide obere ihe e kere eke a na-enweghị enyemaka na ogwe aka ya, nkuzi nchebe nke nne na nna ọ bụla a mụrụ ọhụrụ. N'ezie obere oge ka a ga-enye gị nlekọta kachasị mma. Ma ọ bụghị ezi nzube ọ bụla nwere ike itinye n'ọrụ. - Dịka ọmụmaatụ, mgbe a na-abịa inye nwa ara.
Ugbua n'oge ime ime ka otutu okwu biara na isiokwu a bu "Ibu ara nwa" na n'ime otutu ndi ikpe kwenyesiri ike na ekwesighi ka agbaghara nke a. Ma gịnị ma ọ bụrụ na enweghi ike imezu nzube nke ọma ahụ? Ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ ọtụtụ ma nwee ọtụtụ nne na-eto eto bụ ndị na-enwetụbeghị ihe ọzọ na-enye nwa ara n'oge ime. Ntak-a? A sị ka e kwuwe, e meela mkpebi ahụ ogologo oge.
Ọ bụghị naanị a caesarean ngalaba na otú na-egbu oge mmiri ara ehi ejection nwere ike igbochi ara, a nri nsogbu n'ihi akaghi ọmụmụ ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ike na anatomical ihe mere, nwere ike siere ara ma ọ bụ agaghị ekwe omume. Ọtụtụ ụlọ ọgwụ nwetara lactation maka dị ka na-eto eto nne na uzo ozo dị ka ara mgbapụta ma ọ bụ ọnụ ara ọta advisory ikike. Mgbe ahụ, otu onye ga-anwa ịnwapụta mmiri ara ehi ma ọ bụ iji merie adịghị ike nke nwa ọhụrụ. Maka nne na-eto eto, ọnọdụ a na-esikarị ike. N'ihi na otu onye uche ka ha na-eche banyere ọdịmma nke nwa ma ọ bụ na-adịghị ama onwe-doro anya, n'ụzọ anụ ahụ na aka nke ọzọ, ebe ọ bụ ugboro ugboro nri jikọọ na pumping n'ime a obere oge nkeji dị mgbe ọmụmụ bụ a siri ike anụ ahụ siri ike. Mgbe mkpebi maka a nnọchi nri ga-adakwa n'ọnọdụ ụfọdụ - a mkpebi na akakamade ihe siri ike n'okpuru nduzi nke ngwangwa ire ere nke ime homonụ na na a na-emepụta na ọnọdụ mgbanwe site na ọṅụ ma na-mwute na ọnwụ karịa ga-adị otú ahụ na agbanyeghị.
Ke adianade dị iche iche nke mmiri ara ehi ndị nọ n'ọnọdụ, dị ka tupu formulas - hypoallergenic ma ọ bụ probiotic, iji na Mbelata colic ma ọ bụ reflux, na ntụ ntụ ụdị ma ọ bụ dị ka okokụre mmiri ara ehi - dị ahia fọrọ nke nta ka dum nso nke ara ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka ọnụ ara ọta ma ọ bụ ara-sitere n'ike mmụọ nsọ mmiri iko, karama na Ndị na-eme ihe mgbakwasị ụkwụ na-ezube igbochi ịmịnye ara ara. The nso nke ara nfuli bụ ọtụtụ: Na mgbakwunye ntuziaka nfuli electric dị na unilateral ma ọ bụ bilateral ngwa. Ma oke ugbu a dara na a ara mgbapụta ma ọ bụ nri nwa, ga-n'otu n'otu na, ọ bụrụ na a họọrọ na-enyemaka nke a lactation ọkachamara ma ọ bụ ọkachamara nlekọta ahụike. Ma mgbe ufodu, enwere kwa ihe di iche iche na-eme ka nne buru ndi ozo ma obu ihe ndi ozo. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ maka ọrụ ọkachamara, ị ga-enwerịrị nnwere onwe site na ịzụ nwa.
The mbụ isi ike, ndị na-eto eto nne na nna merie na-enyemaka nke a ndi a anya, ma ụzọ site na ngwaahịa jungle nọgidere na-aga n'ihu ruo mgbe onwe ha Food: Na shelves soro na-na mmiri ara ehi dị iche iche na-egosi na nwa ara ehi ikpo. E wezụga ngwá maka sterilizing karama na pacifiers na uzuoku nri iji dozie ụzọ Breinahrung ma ọ bụ ngwa ndakwa nri-mma, na nwa pacifier ka okpomọkụ mmesho, brushes, mkpa na fom na N'ezie, ehichapụ, creams na lotions ...
Ndị ọkachamara anyị alụsola ọgụ site na ọhịa ngwaahịa ma jiri ya tụnyere ihe ndị dị iche iche. Enwere ike ịchọta rịzọlt ebe a.